Universal Tv warka & dhacdooyinka Soomaalida ka daawo Saafi Films.
Warka Caasimada, gobolka Banaadir & gobolada dalka oo dhan, warar kale oo ku xiiso geliya maalin walba kala soco www.saafifilms.com. Sidoo kale xulka dhacdooyinka Soomaalida, Aflaan, Musalsalo, Sheeko gaaban, layaab, qosol & weliba diinta.
Ogeysiis la wareejin website
Waxaa dhamaan booqdayaasha sharafta leh la ogeysiinayaa in webka Saafi Films & Saafi Studio lagala wareegay maamulkii hore ayna la…
TOOS: DOORASHADA MADAXWEYNAHA JAMHUURIYADDA FEDERAALKA SOOMAALIYA.
WARKA 10 05 2022 Musharaxiinta xilka madaxweynaha oo tiradooda la shaaciyey iyo isdiiwaan gelintii oo lasoo xiray
WARKA 09 05 2022 Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo jeediyey qudbadiisi sanadlaha aheyd
WARKA 08 05 2022 Qaar ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha oo isdiiwaan geliyey
WARKA 07 05 2022 Gudiga doorashada madaxweynaha oo kulan la qaatay laamaha amniga dalka